China Hydroxyl iphelisiwe Polybutadiene mveliso kunye nabenzi | YANXA
I-polybutadiene (HTPB) epheliswe yi-Hydroxyl (HTPB) luhlobo lwerabha engamanzi enobunzima obahlukeneyo beemolekyuli (malunga ne-1500-10,000 g / mol) kunye nenqanaba eliphezulu lokusebenza okusebenzayo. Irabha engamanzi inendibaniselwano eyahlukileyo yeepropathi kubandakanya ubushushu beglasi obuphantsi, ubushushu obuphantsi, ubungakanani obuphezulu bokulayisha, kunye nokukwazi ukuhamba kakuhle. Zisetyenziswe ngokubanzi kwizincamathelisi, ukutyabeka, ukutywina, amayeza, kunye nezinto ezinamandla.
I-HTPB lulwelo oluguqukayo olunombala ofana nephepha le-wax kunye ne-viscosity efana nesiraphu yengqolowa. Iipropathi ziyahluka kuba i-HTPB ngumxube endaweni yekhompawundi esulungekileyo, kwaye yenziwa ukuhlangabezana neemfuno ezithile zabathengi.
1. Inkangeleko: Ulwelo olungenambala nolutyheli
2. INGCACISO, Icandelo I:
Umxholo wehydroxyl mmol / g
Ukufuma,% (w / w)
Umyinge wobunzima beMolekyuli, g / mol
I-viscosis kwi-40 ℃, ii-Pa
3.Ukucaciswa, Icandelo II:
Ngama-2800 ~ 3500
I-viscosis kwi-25 ℃, ii-Pa
Ukusetyenziswa: I-HTPB isetyenziswa ngokubanzi kulo lonke uhlobo lweemoto ene-solid propellant ye-chemical kwi-aviation kunye ne-flight space, i-adhesive gun, kunye nokusetyenziswa komphakathi, ingasetyenziselwa kwimimandla kuquka iimveliso ze-PU, iimveliso ze-elastomer, iipende, umbane Izinto zokutywina zigqunyiwe njl
5. Ubunzima be-170kg kwiilitha ezingama-200 ezenziwe ngomatshini ezenziwe ngeplastiki.
Imveliso Elungiselelweyo iyafumaneka isicelo ezahlukeneyo ngokusekelwe kwiimfuno zakho zobugcisa.
Sinobutyebi be-R & D, kunye nesebe lokuvelisa, elinako ukuphuhlisa kunye nokuvelisa izinto ezintsha kunye nokubalulwa ngokweemfuno ezithile.
Ngolwazi oluthe kratya, nceda uthumele i-imeyile ku "pingguiyi@163.com".
Egqithileyo Isodium Chlorate
Okulandelayo: Umgubo weMagnesium